Mihena ny isan'ny mpizahatany any Amerika Avaratra mankany Costa Rica
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Mihena ny isan'ny mpizahatany any Amerika Avaratra mankany Costa Rica
Jona 8, 2011
Nandritra izay enin-taona farany izay dia nihena ny isan-jaton'ny mpizahatany Amerika Avaratra tany Costa Rica, aseho isa vaovao. Na izany aza, nitombo ny isan-jaton'ny mpitsidika avy any Amerika afovoany sy atsimo.
Raha ny filazan'ny Instituto Costarricense de Turismo dia nisy fiovana lehibe teo amin'ny tsenan'ny fizahantany nanomboka ny taona 2005. Tamin'izany fotoana izany, ny mpitsidika amerikana avaratra dia nahatratra 53% ny mpizahatany vahiny tonga tany Costa Rica raha 30% fotsiny ny mpizahatany any Amerika Afovoany sy atsimo. Tamin'ny 2010, ny amerikana avaratra dia nidina hatramin'ny 48%, ary ny amerikana afovoany sy atsimo dia nitombo hatramin'ny 38%. Raha atotaly dia mpizahatany 2.1 tapitrisa no nitsidika an'i Costa Rica tamin'ny 2010 fa tsy 1.7 tapitrisa tamin'ny 2005.
Na dia ambany aza ny isan-jaton'ny mpizahatany Amerika Avaratra, dia nitombo ny isan'ny tao anatin'izay enin-taona lasa izay nisy 110,000 hatramin'ny 895,370 ka hatramin'ny 1,005,309 XNUMX XNUMX.
Ny andrim-pizahantany Costa Rica dia nahazo vaovao tsara sy ratsy nandritra ny roa volana farany. Tamin'ny volana martsa, ny gazety amerikana, International Business Times, dia nametraka an'i Costa Rica voalohany tamin'ny lisitry ny toerana fizahan-tany malaza indrindra. Costa Rica dia voasokajy ho anisan'ny toerana nisafidy "Top 10" izay nifidianan'ny mpivady vao handany ny volan-tantely. Saingy i Costa Rica dia nahita fihemorana kely ihany koa tamin'ny fifaninanana fizahan-tany eran-tany tamin'ny 2010 raha oharina tamin'ny taona teo aloha araka ny tatitra nataon'ny World Economic Forum.
Mila fanavaozana ny fotodrafitrasa
Costa Rica dia mbola teo amin'ny laharana fahadimy tao amin'io faritra io, saingy nilatsaka ny isa iray amin'ny ankapobeny ho isa 56 amin'ny firenena 139. Nahazo marika tsara ny firenena noho ny harena voajanahary misy azy amin'ny laharana faha-6 noho ny toerana maro an'ny vakoka manerantany, ny biby maro karazana, ary ny isan-jaton'ny faritra arovan'ny firenena. Costa Rica koa dia nanohy nanatsara ny faharetan'ny tontolo iainana nandritra ny taona maro ary manana ny laharana ambony ankehitriny amin'ny isa 25 amin'ny ankapobeny. Na izany aza, misy ihany koa ny zavatra tokony hatsaraina.
Ny fahasalamana sy ny fahadiovana izay misy an'i Costa Rica ny laharana faha-74 dia mijanona ho ahiahy. Ary na dia mivoatra tsara aza ny fotodrafitrasa fizahan-tany any Costa Rica ary mahazo ny laharana faha-39, dia noho ny fisian'ny orinasam-panofana fiara lehibe sy ny efitrano fandraisam-bahiny betsaka. Mila fanavaozana lehibe ny fotodrafitrasa fitaterana an-tanety. Costa Rica dia nahazo ny laharana faha-93 amin'ity faritra ity indrindra satria ny lalana sy ny seranana dia manahirana ny fivezivezena ao amin'ny firenena.